စာရေးသူရဲ့စကားချီး - နှုတ်ကပတ်တော်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ
ဤစာအုပ်သည်နှစ်ပေါင်း 1912 နှင့် 1932 အကြားကြားကာလမှာ Benoni ခ Gattell မှနှုတ်တိုက်ချပေးခဲ့တာခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ. သူကထပ်ကာထပ်ကာကျော်ကအလုပ်လုပ်ခဲ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့ 1946 အတွက်အနည်းဆုံးအနည်းငယ်ပြောင်းလဲသွားတယ်ကြပြီမဟုတ်ကြောင်းအနည်းငယ်သောစာမျက်နှာများရှိပါတယ်။ အထပ်ထပ်နှင့်ရှုပ်ထွေးရှောင်ရှားရန်တစ်ခုလုံးကိုစာမကျြနှာကိုဖျက်လိုက်ပါပြီ, ငါအများကြီးကဏ္ဍများ, အပိုဒ်နှင့်စာမကျြနှာကဆက်ပြောသည်ပါပြီ။
ငါ့ကိုထင်နှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာရေးသားဖို့အတှကျအခကျခဲသောကြောင့်အကူအညီများမပါဘဲ, က, အလုပျစာဖြင့်ရေးသားခဲ့ကြပေသည်ရှိမရှိသံသယဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မပုံစံသို့ဘာသာရပ်ကိစ္စထင်နှင့်ပုံစံများ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုထုတ်တည်ဆောက်ရန်သင့်လျော်သောစကားများကို ရွေးချယ်. စဉ်အကြှနျုပျ၏ကိုယျခန်ဓာနေဆဲဖြစ်ခဲ့ရတယ်: ဒါကျွန်မအမှန်ပင်သူပြုတော်မူပြီထိုအလုပျအတှကျသူ့ကိုကျေးဇူးတင်တယ်။ ငါသည်လည်းဤနေရာတွင်သူတို့ရဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုနှင့်အလုပ်ပြီးပါကအတွက်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအကူအညီများအဘို့, အမည်မဖော်ဆက်လက်ရှိနေရန်လိုသူသူငယ်ချင်း၏ကြင်နာရုံးများအသိအမှတ်ပြုရပါမည်။
တစ်ဦးကအခက်ခဲဆုံးအလုပ်တစ်ခုကိုကိစ္စဆကျဆံ recondite ဘာသာရပ်ဖော်ပြအသုံးအနှုန်းများရနျဖွစျသညျ။ ငါ့အခက်ခဲကြမ်းတမ်းအားထုတ်မှုအကောင်းဆုံးအချို့ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်ရပ်မှန်များရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနှင့် attribute တွေဖော်ပြမည်, နှင့်လူ့အလောင်းတွေအတွက်သတိတည်ဖို့သူတို့ရဲ့ကျွန်မတို့ဟာခွဲလို့မရတဲ့စပ်လျဉ်းပြသနိုင်ဖို့စကားများနှင့်စာပိုဒ်တိုများရှာတွေ့ခဲ့သည်။ ထပ်ခါတလဲလဲအပြောင်းအလဲများကိုနောက်မှငါနောက်ဆုံးတော့ဤနေရာတွင်အသုံးပြုသောအသုံးအနှုန်းများအပေါ်အခြေချခဲ့သည်။
အတော်များများကဘာသာရပ်များသူတို့ကိုငါဖြစ်ချင်ပါတယ်သကဲ့သို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလုပ်ကြသည်မဟုတ်ပေမယ့်တစ်ဦးချင်းစီကိုဖတ်ရှုခြင်းကအခြားအပြောင်းအလဲများအပေါ်အကြံပြုလိုတယ်သလိုပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ လုပ်. အပြောင်းအလဲလောက်သို့မဟုတ်အဆုံးမဲ့ဖြစ်ရမည်။
ငါမည်သူမဆိုဟောပြောဖို့ယူဆပါတယ်မထင်သော်လည်း, ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်တရားကိုဟောပြောတစ်ခုသို့မဟုတ်ဆရာထည့်သွင်းစဉ်းစားကြဘူး။ ဒါကြောင့်ကျွန်မစာအုပ်တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်ကြောင်းကိုမဟုတ်ကြကျွန်မရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးက၎င်း၏ရေးသားသူအဖြစ်အမည်ဖြင့်မှည့မနေစေခြင်းကြိုက်တတ်တဲ့လိမ့်မယ်။ ငါသတင်းအချက်အလက်ပူဇော်ရသော ပတ်သက်. ဘာသာရပ်များ၏တန်ခိုးအာနုဘော်, သက်သာခြင်းနှင့် Self-ထင်ထဲကအကြှနျုပျကိုလွှတ်ပေးခြင်းနှင့်ကြိုးနှံ၏အသနားခံတားမြစ်ထားသည်။ ငါတိုင်းကလူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသောသတိနှင့်နေိုငျသောမိမိကိုယ်ကိုထူးဆန်းနှင့်တုန်လှုပ်ထုတ်ပြန်ချက်များလုပ်ဝံ့; ငါတစ်ဦးချင်းစီသတင်းအချက်အလက်များတင်ဆက်နှင့်အတူသူသို့မဟုတ်မပွုမညျဘယျသို့ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်အခွင့်ကိုအဘို့အယူပါ။
အတှေးအပုဂ္ဂိုလ်များသတိဖြစ်ခြင်း၏ပြည်နယ်များ၌ငါ့အတွေ့အကြုံတွေကိုတချို့၏ငါနှင့်အတူခင်မင်သိကျွမ်းခံရဖို့မှာဤမျှလောက်သောအရာတို့ကို၏ရေးသားဖို့အတှကျအဖြစ်နိုင်ခဲ့ပုံကိုရှင်းပြဖို့ကူညီပေးနိုငျသောငါ၏အသက်တာ၏ဖြစ်ရပ်များကဒီမှာစကားပြော၏လိုအပ်မှုကိုအလေးပေးခဲ့ကြ ပစ္စုပ္ပန်ယုံကြည်ချက်နှင့်အတူကှဲလှဲ။ သူတို့ဟာအဘယ်သူမျှမကျမ်းကိုးစာရင်းဖြည့်တွဲနေသည်နှင့်မျှမရည်ညွှန်းဤနေရာတွင်ရာ၌ထုတ်ပြန်ချက်များအတည်ပြုရန်ကမ်းလှမ်းကြောင့်ဒီလိုအပ်သောဟုဆိုသည်။ ကြှနျတေျာ့အတှေ့အကွုံတချို့ကငါကြား၏သို့မဟုတ်ဖတ်ရှုပြီးဘာမှမတူပဲခဲ့ကြပြီ။ ကျနော်တို့တှငျနထေိုငျလူ့အသက်ကိုနှင့်ကမ္ဘာအကြောင်းကိုငါ့ကိုယ်ပိုင်စဉ်းစားတွေးခေါ်ငါစာအုပ်တွေထဲမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့တွေ့ရှိခဲ့ကြပြီမဟုတ်ငါ့ကိုဘာသာရပ်များနှင့်ဖြစ်ရပ်မှထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပါသည်။ သို့သော်ထိုသို့သောကိစ္စရပ်များဖြစ်နိုင်ကြောင်းဆိုပါစို့မှမိုဖြစ်သော်လည်း, အခြားသူများအားအမည်မသိပါလိမ့်မယ်။ သိကြပေမယ့်မပြောနိုင်တဲ့သူတွေကိုရှိရပေမည်။ ငါလျှို့ဝှက်မရှိပေါင်ထားသောဥစ္စာကိုအောက်မှာဖြစ်၏။ ငါမဆိုကြင်နာမရှိအဖွဲ့အစည်းနှင့်သက်ဆိုင်။ ကျွန်မစဉ်းစားခြင်းဖြင့်တွေ့ပြီအဘယျသို့ပြောပြမယုံကြည်ခြင်းတရားကိုချိုးတော်မူပါ နိုးနေချိန်မှာမဟုတျဘဲအိပ်စက်ခြင်းအတွက်သို့မဟုတ်လက်ခံထားတဲ့အစွဲအတွက်တည်ငြိမ်စဉ်းစားတွေးခေါ်သည်။ ငါဖြစ်ခဲ့ဖူးဘူးမဟုတ်သလိုအစဉ်အမြဲငါမဆိုမျိုးကိုလက်ခံထားတဲ့အစွဲအတွက်ဖြစ်ရန်ဆန္ဒရှိကြဘူး။
ငါအာကာသကဲ့သို့သောဘာသာရပ်များအကြောင်းကိုစဉ်းစားနေချိန်တွင်မသိဖြစ်ရပြီအဘယျသို့ကိစ္စ၏ယူနစ်, အတှေးအများကိစ္စ, ထောက်လှမ်းရေး, အချိန်, အတိုင်းအတာ, ထိုဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်ပြင်ပများ၏ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ, ငါသည်မျှော်လင့်ပါတယ်, အနာဂတ်ရှာဖွေရေးနှင့်ခေါင်းပုံဖြတ်မှုအတွက်ဘုံဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြပါလိမ့်မယ် ။ ထိုကာလအားဖြင့်ညာဘက်အကငျြ့လူ့အသက်ကို၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သင့်ကြောင်း, သိပ္ပံနှင့်တီထွင်မှုများ၏ရင်ပေါင်တန်းနိုင်ရန်စောင့်ရမည်။ ထိုအခါလူ့ယဉ်ကျေးမှုကိုဆက်လက်နိုင်ပြီး, တာဝန်ယူမှုနှင့်အတူလွတ်လပ်ရေးနေ့တစ်ဦးချင်းဘဝနှင့်အစိုးရ၏အုပျခြုပျဖြစ်လိမ့်မည်။
ရစ်သမ်ဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကမ္ဘာနှင့်ချိတ်ဆက်မှုကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးခံစားမှုဖြစ်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းပေါ်ငါခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်းခံစားရနိုင်ကြောင်း, ငါအသံတွေကိုနားမထောင်နိုင်ဘူး။ ကျွန်မအသံကိုဖြင့်အသံရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်သဘောပေါက်; ငါရစ်သမ်အသုံးပြုပုံနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကို-အသံထုတ်ဖော်ပြောဆိုမဆို၏အဓိပ္ပါယ်ကိုရနိုင်, ခံစားချက်အဖြစ်တစုံတခုကိုမြင်ပေမယ့်ငါဘဲ, နှင့်ငါ့ခံစားချက်ပုံစံနှင့်စကားအားဖြင့်ဖော်ပြထားခဲ့ပြီးသောအရာဝတ္ထု၏အရောင်ကိုပေးတော်မူ၏။ ငါမျက်မှောက်၏အဓိပ္ပာယ်အသုံးပွုနိုငျနှင့်အရာဝတ္ထုကိုတွေ့မြင်နိုင်သည့်အခါ, ငါသည်အရာငါပုံစံများနှင့်ပွဲတွေ့ခံစားချက်အဖြစ်ငါဖမ်းမိခဲ့ရာနဲ့အတူအနီးစပ်ဆုံးသဘောတူညီချက်အတွက်ဖြစ်ရန်, ခံစားမိခဲ့သည်။ ငါမျက်မှောက်၌, ကြားနာ, အရသာနှင့်အနံ့များ၏အာရုံကိုအသုံးနိုင်ခဲ့သည်နှင့်မေးခွန်းများမေးခြင်းနှင့်ဖြေဆိုနိုင်သည့်အခါငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်ထူးဆန်းတဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုအတွက်လူစိမ်းဖြစ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါတှငျနထေိုငျခန္ဓာကိုယ်မဟုတ်ခဲ့သိတယ်, ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမငါ့ကိုအဘယ်သူသည်အဘယ်ငါမှလာဘယ်မှာငါဖြစ်ခဲ့သည်သို့မဟုတ်ပြောပြနိုင်, ငါမေးခွန်းထုတ်တော်မူသောသူတို့၏အမျိုးအပါဆုံးသူတို့နထေိုငျသောအလောင်းများကိုခဲ့ကြသည်ယုံကြည်ဖို့သလိုပဲ။
ငါကိုယ့်ကိုကိုယ်လွတ်နိုင်ဘူးရာမှတစ်ဦးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသဘောပေါက်ခဲ့သည်။ ငါပျောက်တစ်ဦးတည်းနှင့်ဝမ်းနည်းမှုတစ်ခုစိတ်မကောင်းပြည်နယ်၌ရှိ၏။ ထပ်ခါတစ်လဲလဲအဖြစ်အပျက်နှင့်အတွေ့အကြုံများသောအရာတို့ကိုသူတို့ဖြစ်သည်ထင်ရှားသောအရာကိုမရခဲ့ငါ့ကိုယုံကြည်; ဆက်လက်အပြောင်းအလဲရှိကွောငျး, ဘာမှမရှိမွဲရှိကွောငျး, လူတွေကမကြာခဏသူတို့ကယ့်ကိုဘယျအရာကိုဆိုလို၏ဆန့်ကျင်ဘက်ဟုဆိုသည်။ ကလေးများသူတို့ "-ယုံကြည်စေ" သို့မဟုတ်ဟုခေါ်တွင်ဂိမ်းကစား "ကျွန်တော်တို့ဟန်ဆောင်ပါစေ။ " ကလေးများကစား, ယောက်ျားမိန်းမတို့လုပ်-ယုံကြည်ဟန်ဆောင်လေ့ကျင့်; နှိုင်းယှဉ်အနည်းငယ်ကလူကိုတကယ်သစ္စာဝါဒီများနှင့်ရိုးသားသောဖြစ်ကြသည်။ အဲဒီမှာစွန့်ပစ်လူ့အားထုတ်မှု၌ရှိ၏နှင့်ပွဲဟာကြာရှည်မခံခဲ့ပါ။ ပွဲနောက်ဆုံးမှလုပ်မခံခဲ့ရပါ။ ဘယ်လိုသောအရာတို့ကိုကြာရှည်မည်ကိုမဖြစ်စေနှင့်စွန့်ပစ်နဲ့ဖရိုဖရဲမပါဘဲဖန်ဆင်း: ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်မေး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနောက်ထပ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကလညျးပထမဦးစွာသင်ချင်သောအရာကိုသိကြ၏ မြင်တဖြည်းဖြည်းစိတျထဲမှာသင်လိုချင်တဲ့အရာရှိသည်မယ်လို့ရသောပုံစံဖြင့်ကိုင်ထားပါ။ ထိုအခါထင်နှင့်အလိုတော်နှင့်အသှငျအပွငျသို့ကြောင်းပြော၏, သင်မမြင်ရတဲ့လေထုထဲကနေကိုစုဝေးစေနှင့်ပုံစံသို့နှင့်ပတ်ပတ်လည် fixed လိမ့်မည်ထင်သောအရာကို။ ကျွန်မအဲဒီစကားမထင်ခဲ့ပါဘူး, ဒါပေမယ့်ဟောပြောသောဤစကားကိုငါထို့နောက်ထင်သောအရာကိုဖော်ပြ။ ငါကြောင့်လုပ်နိုင်ယုံကြည်မှုခံစားခဲ့ရနှင့်တစ်ကြိမ်ကြိုးစားခဲ့နှင့်ရှည်လျားသောကြိုးစားခဲ့မှာပါ။ ငါမအောင်မြင်ခဲ့ပေ။ ပျက်ကွက်တွင်ငါယုတျညံ့, စိတ်ပျက်ခံစားရတယ်, ငါရှက်သလိုဖြစ်သွားပါတယ်။
ငါဖြစ်ရပ်များ၏အကဲဖြစ်ခြင်းမကူညီနိုင်ဘူး။ ငါကလူအထူးသဖြင့်သေခြင်းအကြောင်း, ဖြစ်ပျက်သောအရာတွေအကြောင်းပြောပါကြားသိအဘယျသို့ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မထင်ခဲ့ပေ။ ကျွန်မရဲ့မိဘတွေကဘုရားကိုကိုးကွယ်သောခရစ်ယာန်တွေကိုဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်မဖတ်ကြားဘုရားသခငျသညျကမ်ဘာကိုဖန်ဆင်းသူကပြောပါတယ်; သူသည်လောကရှိတစ်ဦးချင်းစီလူ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုနေိုငျသောဝိညာဉျသ created မူထသော, နှင့်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုကိုနားမထောင်ခဲ့ဘူးသူကိုဝိညာဉ်ငရဲသို့ချခြင်းကိုမယ်လို့နှင့်ကမ္ဘာအဆက်ဆက်မီးနှင့်ကနျ့အတွက်မီးမရှို့မယ်။ ငါ၏နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုမယုံကြည်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါဟာငါ့ကိုဆိုပါစို့ရန်အဘို့အလွန်းစိတ်ပျက်ဖွယ်သလိုပဲသို့မဟုတ်မည်သည့်ဘုရားသခငျသညျသို့မဟုတ်ဖြစ်လျက်ရှိသည်ကမ္ဘာ့ရာ၌ခန့်ထားပြီနိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်ငါနေထိုင်ခဲ့ရသောကိုယ်ခန္ဓာအဘို့အကြှနျုပျကိုဖနျတီးခဲ့ကြသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ငါကနျ့ပွဲနဲ့ငါ့လက်ချောင်းကိုမီးရှို့ခဲ့ကြောင်း, ငါခန္ဓာကိုယ်အသေသတ်ခြင်းကိုမီးရှို့ရမည်နိုင်ကြောင်းယုံကြည်သည် ဖြစ်. , ငါမူကား, ငါမီးရှို့ရမည်နိုင်ဘူးနှင့်မသေနိုင်သကဲ့သို့မီးလောင်ကနေနာကျင်မှုကြောက်မက်ဘွယ်သောခဲ့သော်လည်းငါသိ၏ခဲ့ဘာကြောင့်မီးနှင့်ကနျ့, ငါ့ကိုသတ်နိုင်ဘူးသိတယ်။ ငါစိုးရိမ်ရေမှတ်ခံစားနိုင်ပေမယ့်ငါမကြောက်ရွံ့ခဲ့ချေ။
ပြည်သူ့ဘဝအကြောင်းကိုသို့မဟုတ်သေခြင်းတရားနှင့် ပတ်သက်. '' အဘယ်ကြောင့် 'သို့မဟုတ်' 'အဘယျသို့' 'ကိုသိရန်မထင်ခဲ့ပေ။ ငါဖြစ်ပျက်သမျှအဘို့အကြောင်းပြချက်အဲဒီမှာသူဖြစ်ရမည်သိတယ်။ ငါသည်အသက်နှင့်သေခြင်း၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုသိရန်နှင့်အစဉ်အမြဲအသက်ရှင်ချင်တယ်။ ငါအဘယ်ကြောင့်မသိပေမယ့်ငါလိုမကူညီနိုင်ဘူး။ ငါသည်ဤလောက၏နှင့်နေ့ညဉ့်နှင့်အသက်နှင့်သေခြင်းစီမံခန့်ခွဲသူကိုပညာရှိရှိခဲ့သည်မဟုတ်လျှင်မရှိနေ့ညဉ့်နှင့်အသက်နှင့်သေခြင်းနှင့်မျှကမ္ဘာကြီးရှိနိုင်တယ်လို့သိသည်။ သို့သျောလညျးအကြှနျုပျသရည်ရွယ်ချက်ဘဝနှင့်သေခြင်း၏လျှို့ဝှက်ချက်များနှင့်အတူအပ်နှင်းခံရဖို့ကျွန်မသင်ယူသင့်တယ်နဲ့ကျွန်မဘာလုပ်သင့်တယ်ဘယ်လိုငါ့ကိုပြောပြပါလိမ့်မယ်တဲ့သူတွေကိုပညာရှိရှာတွေ့မှဖြစ်လိမ့်မယ်လို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်။ လူတွေနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ငါပင်, ဤပြောနေငါ၏အခိုငျအမာသန်နိဋ်ဌာနျထင်မှာမဟုတ်ဘူး; သူတို့လူမိုက်တို့သို့မဟုတ်ရူးဖြစ်ငါ့ကိုယုံကြည်ပေသည်။ ကျွန်မအဲဒီအချိန်ကအကြောင်းကိုခုနစ်နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။
တဆယ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုနှစ်ပေါင်းလွန်။ ငါသူတို့ကြီးပြင်းခြင်းနှင့်ယောက်ျားမိန်းမတို့သို့ပြောင်းလဲသွားစဉ်အထူးသဖြင့်သူတို့ရဲ့မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း, ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများ၏ဘဝအပေါ်ကွဲပြားခြားနားသောအမြင်သတိပြုမိ, ငါ့ကိုယ်ပိုင်အထူးပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အကြှနျုပျ၏အမြင်များကိုပြောင်းလဲသော်လည်းငါ့ရည်ရွယ်ချက်ဖူး - သိသောပညာရှိသောသူဖြစ်နှင့်သောသူတို့, ကိုရှာဖွေရန်နှင့်အဘယ်သူကိုငါဘဝနှင့်သေခြင်း၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုသင်ယူနိုင် - မပြောင်းလဲဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါသည်သူတို့၏ဖြစ်တည်မှု၏သေချာရှိ၏ ကမ္ဘာကြီးကိုသူတို့မရှိဘဲ, မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဖြစ်ရပ်များ၏သာသနာကို၌ငါနိုင်ငံ၏အစိုးရသို့မဟုတ်ဤဆက်လက်ဘို့မဆိုလုပ်ငန်းတစ်ခုစီမံခန့်ခွဲမှုရှိရမည်သကဲ့သို့အစိုးရနှင့်ကမ္ဘာတစ်စီမံခန့်ခွဲမှုရှိရမည်သိမြင်နိုင်ပါတယ်။ တစ်နေ့မှာငါ့အမိငါယုံကြည်သည်အဘယျသို့အကြှနျုပျကိုမေးတယ်။ မဆိုင်းမတွငါဆိုသည်: ငါသံသယမရှိဘဲသိကြတရားမျှတမှုငါ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝအဘယ်သို့ငါငါမူလကပင်သိနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ငါအရှိဆုံးအလိုဆန္ဒပြီးမြောက်၏အဘယ်သူမျှမဖြစ်နိုင်ချေတွေ့နိုင်ပါသည်ကြောင့်၎င်း, ပြုလုပ်မအထောက်အထားဖြစ်ဟန်သော်လည်း, ကမ္ဘာကြီးကိုအုပ်စိုးသော။
ထိုနှစျတှငျ, 1892 ၏နွေဦး၌ငါမတယော Madam Blavatsky မဟတ္တမဟုခေါ်ကြသည်သူအရှေ့၌ပညာရှိယောက်ျားတစ်ဦးကျောင်းသားခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေစက္ကူဖတ်; မြေကြီးပေါ်မှာထပ်တလဲလဲဘဝတွေကိုမှတဆင့်သူတို့သည်ပညာကိုမှီကြဖူး; သူတို့အသက်နှင့်သေခြင်း၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုသိမ်းယူ, သူတို့သည် Madam Blavatsky သူတို့ရဲ့သွန်သင်ချက်အများပြည်သူပေးထားနိုင်ရာမှတဆင့်တစ်ဦးနှင့်စပါးကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဝင်ရောက်, ဖွဲ့စည်းစေခဲ့ကြောင်းကြောင်းကို။ ထိုညနတစ်ဦးဟောပြောပွဲရှိတယ်လိမ့်မည်။ ငါသွား၏။ နောက်ပိုင်းပေါ်ငါလူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ardent အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူတို့ကိုခေါ်ခဲ့ကြသည်သမျှအမည်များအားဖြင့် - - ပညာရှိတို့ရှိခဲ့သည်သောကြေညာချက်ငါ့ကိုအံ့သြသွားဘဲ, ငါမူလကပင်လူသား၏တိုးအဘို့နှင့်သဘောသဘာဝ၏ညှနျကွားနှငျ့လမျးညှနျအတှကျအဖြစ်လိုအပ်သော၏သေချာခဲ့သောအရာကိုသာနှုတ်သက်သေအထောက်အထားများဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါသူတို့ကိုငါအကြောင်းကိုတတျနိုငျသအားလုံးဖတ်ပါ။ ငါပညာရှိတဦးတည်း၏အကြောငျးသားဖြစ်လာ၏ထင်; ဒါပေမယ့်အစစ်အမှန်လမ်းဘယ်သူ့ကိုမှမဆိုတရားဝင်လျှောက်လွှာအားဖြင့်မဟုတ်ခဲ့ပေမယ့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မထိုက်မတန်ခြင်းနှင့်အဆင်သင့်ဖြစ်ကြောင်းနားလည်ရန်ငါ့ကိုဦးဆောင်တွေးဆက်ပြောသည်။ ဒီလိုငါပဋိသန္ဓေယူသကဲ့သို့ '' ပညာရှိ 'ကိုမွငျသို့မဟုတ်ထံ၌ကြားရ, မငါနှင့်အတူမည်သည့်အဆက်အသွယ်ရှိခဲ့ကြပြီမဟုတ်။ ငါမဆရာရှိခဲ့တယ်။ ယခုငါထိုကဲ့သို့သောကိစ္စရပ်များ၏ပိုကောင်းတဲ့နားလည်မှုရှိသည်။ အစစ်အမှန် '' ပညာရှိ '' အပြီးအပိုင်၏ဘုံ၌, Triune တည်ဖြစ်ကြသည်။ ငါသည်ခပ်သိမ်းသောလူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့် ဆက်စပ်. မပြောဘဲနေကြ၏။
1892 ၏နိုဝင်ဘာလကနေငါအံ့သြခြင်းနှင့်အလွန်အရေးပါအတွေ့အကြုံများမှတဆင့် 1893 ၏နွေဦး၌, ငါ၏အသက်တာ၏အများဆုံးထူးခြားသောဖြစ်ရပ်အဲဒီမှာဖြစ်ပွားခဲ့သည်သောအောက်ပါလွန်။ ငါနယူးယောက်စီးတီးရှိ, 14th ရိပ်သာလမ်းမှာ 4th လမ်းကူးခဲ့သည်။ ကားများနှင့်လူများကပွေးသှားတာခဲ့ကြသည်။ အရှေ့မြောက်ဘက်ထောင့် curbstone မှတက်နင်းနေစဉ်, အလင်း, suns တသောင်း၏ထက် သာ. ကြီးမြတ်သည်ငါ့ခေါင်းကို၏အလယ်ဗဟိုတွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့။ ကြောင်းချက်ချင်းသို့မဟုတ်ပွိုင့်များတွင်ထာဝရဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာပါ။ အချိန်မရှိခဲ့သည်။ အဝေးသင်နှင့်ရှုထောင့်သက်သေအထောက်အထားမရှိကြ၏။ သဘာဝတရားယူနစ်၏ရေးစပ်ခဲ့သည်။ ငါထောက်လှမ်းရေးအဖြစ်သဘောသဘာဝနှင့်ယူနစ်၏ယူနစ်မသိဖြစ်ခဲ့သည်။ အတွင်းနှင့်တဘက်, ဒါကြောင့်ပြော, သာ. ကြီးမြတ်နှင့်အငယျဆုံးသောအလင်းများ ရှိ. , သာ. ယူနစ်များ၏အမျိုးမျိုးထုတ်ဖော်ပြသသောအပြောင်အလင်းများ, pervading ။ အဆိုပါအလင်းများသဘာဝမရှိသည် ဖြစ်. , သူတို့ Intelligence သိအလင်းများအဖြစ်အလင်းများခဲ့ကြသည်။ သူတို့အားအလင်းများ၏အရောင်အဝါသို့မဟုတ်လျှပ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်, ပတျဝနျးကငျြနေရောင်ခြည်တစ်ဦးသိပ်သည်းမြူဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုလူအပေါင်းတို့အလင်းများနှင့်ယူနစ်နှင့်တ္ထုများနှင့်တဆင့်ကျွန်မသိစိတ်ကိုရောက်ရှိခြင်းမသိဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါ Ultimate နှင့် Absolute Reality အဖြစ်သိစိတ်ကိုမသိခြင်း, အမှုအရာများနှင့်စပ်လျဉ်းမသိဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါမတုန်လှုပ်, စိတ်ခံစားမှု, ဒါမှမဟုတ် ecstasy ခံစားခဲ့ရသညျ။ စကားများဝိညာဏ်ကိုဖော်ပြရန်သို့မဟုတ်ရှင်းပြဖို့ရှင်းရှင်းပျက်ကွက်ခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာငါထို့နောက်သတိခဲ့အရာကိုမှန်မှန်အတွက်သူတော်ကောင်းတရား grandeur နှင့်အာဏာ၏ဖော်ပြချက်များနှင့်အမိန့်များနှင့်စပ်လျဉ်းကြိုးစားမှအချည်းနှီးဖြစ်လိမ့်မည်။ နှစ်ကြိမ်လာမယ့်တဆယ်လေးနှစ်လွန်ကာလအတွင်းစီအခါသမယတွင်အချိန်ကြာမြင့်စွာငါသိစိတ်ကိုမသိဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော်အချိန်ကာလအတွင်းကျွန်မကြောင်းပထမဦးဆုံးအခိုက်အတွက်မသိခဲ့ထက်မပိုမသိခဲ့။
ဝိညာဏ်တိုင်းယူနစ်အတွက်လက်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်သိစိတ်ကို၏ရှေ့မှောက်တွင်အဲဒါကိုသတိဖြစ်သည့်အတွက်ဒီဂရီအတွက်လုပ်ဆောင် function ကိုအဖြစ်တိုင်းယူနစ်သတိစေသည်။
သိစိတ်ကိုမသိဖြစ်ခြင်းဒီတော့သတိခဲ့သူတဦးတည်းဖို့ '' အမည်မသိ '' ဖော်ပြသည်။ ထိုအခါကသူသိစိတ်ကိုမသိဖြစ်ခြင်း၏နိုင်သလဲဆိုတာသိစေကြောင်းတဦးတည်း၏တာဝန်ဖြစ်လိမ့်မည်။
သိစိတ်ကိုမသိဖြစ်ခြင်းအတွက်ကြီးစွာသောတန်ဖိုးရှိကြောင့်စဉ်းစားအသုံးပြုပုံဆိုဘာသာရပ်အကြောင်းကိုသိရန်တဦးတည်းဖွဖြစ်ပါတယ်။ စဉ်းစားတွေးခေါ်အတှေးအချေါမြား၏ဘာသာရပ်အပေါ်အတွင်းသိအလင်း၏တည်ငြိမ်ကျင်းပနိုင်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။ အတိုချုပ်ဖော်ပြထား, စဉ်းစားတွေးခေါ်လေးအဆင့်ဆင့်၏ဖြစ်ပါသည်: ဘာသာရပ်ရွေးချယ်ခြင်း; ကြောင်းဘာသာရပ်အပေါ်သိအလင်းကိုင်ပြီး; အလင်းအာရုံစူးစိုက်; နှင့်အလင်း၏အာရုံစူးစိုက်။ အလင်းအာရုံစူးစိုက်တာဖြစ်ပါတယ်သောအခါ, ဘာသာရပ်လူသိများသည်။ ဒီနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုပုံစဉ်းစားခြင်းနှင့် Destiny စာဖြင့်ရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဤစာစောင်၏အထူးရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါသည်:, အချိန်အတွင်းမှာနှင့်တဘက်, စုံလင်သော sexless အလောင်းတွေ၌အကြှနျုပျတို့၏အကြီးတွေးခေါ်နဲ့ knower အစိတ်အပိုင်းများနှင့်အတူနေသော, Triune တည်ကျနော်တို့သတိရှိရှိသနေိုငျတဦးချင်း Trinity ၏ကျွန်မတို့ဟာခွဲလို့မရတဲ့ပြုသောအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ကြောင်းလူ့အလောင်းတွေအတွက်သတိတည်ပြောပြရန် အမြဲတမ်းအတွက်၏ဘုံပြခြင်း, ငါတို့သည်ယခုလူ့အလောင်းတွေအတွက်သတိတည်, တစ်ဦးအလွန်အရေးပါစမ်းသပ်မှုအတွက်ပျက်ကွက်ကြောင်းနှင့်အားဖြင့်ဒီယာယီလူနှင့်ကလေးမွေးဖွားခြင်းနှင့်သေခြင်းနှင့် re-ဖြစ်တည်မှု၏အမြိုးသမီးတဤလောကသို့အပြီးအပိုင်၏ဘုံကနေကိုယျ့ကိုယျကိုပြည်ပရောက်; ကျွန်တော်တစ်ဦး Self-ညှို့အိပ်ပျော်ခြင်းသို့ကိုယျ့ကိုယျကိုထားကြောင့်အိပ်မက်မက်ဖို့, ဒီအဘယ်သူမျှမမှတ်ဉာဏ်ရှိသည်; ကျွန်တော်အသေခံမှတဆင့်ပြန်ထမြောက်, အသက်ရှင်ခြင်းမှတစ်ဆင့်အိပ်မက်မက်ဆက်လက်မညျဖွစျကွောငျး, ငါတို့သည် ထောက်. , ငါတို့သည်ကိုယ်ကိုကိုယ်ထားရာသို့ hypnosis ထဲကကျနော်တို့က de-ညှို့သည်အထိပါတီအားဤအမှုကိုဆက်လက်ရမည်ဟု; အကြောင်း, သို့သော်တာရှည်ပါကကြာ, ငါတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိပ်မက်ကနေနိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့အလောင်းတွေထဲမှာကိုယျ့ကိုယျကိုအဖြစ်ကိုယျ့ကိုယျကိုမသိဖြစ်လာ, ပြီးတော့အသစ်တဖန်မွေးဖွားနှင့်ငါတို့အိမ်မှာထာဝရအသကျရနျကြှနျုပျတို့၏အလောင်းများကို restore ရမယ် - ငါတို့သည်လာသောကနေအပြီးအပိုင်၏ဘုံ - အရာ ငါတို့ဥစ်စာ၏ဤလောက၏စိမ်ပေမယ့်သေတတ်သောမျက်စိမြင်သည်မဟုတ်။ ထိုအခါမှသာသတိရှိရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့သောအရပ်တို့ကို ယူ. တိုးတက်မှု၏ထာဝရအမိန့်၌အကြှနျုပျတို့၏စိတျအပိုငျးကိုဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုဆောင်ရွက်မှအဆိုပါလမ်းအတိုင်းလိုက်နာထားတဲ့အခန်းများတွင်ပြသထားသည်။
ဒီအရေးအသားမှာဒီအလုပ်၏လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ပရင်တာနှငျ့အတူရှိ၏။ စာဖြင့်ရေးသားထားပြီးအဘယ်အရာကိုမှထည့်သွင်းဖို့နည်းနည်းအချိန်လည်းရှိ၏။ ၎င်း၏ပြင်ဆင်မှုများ၏နှစ်ပေါင်းများစွာကာလအတွင်းကမကြာခဏငါကျမ်းပိုဒ်အချို့ကိုအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူနားမလည်ပုံပေါက်သောစာသားထဲမှာပါဝင်သည်ကိုမေးမွနျးခဲ့သညျ, ဒါပေမဲ့အဲဒီစာမကျြနှာတှငျဖျောပွခဲ့သရာ၏အလင်း၌, အသိပါစေနှင့်အဓိပ္ပာယ်ကိုရှိသည်သော, အရာ , တစ်ချိန်တည်းမှာ, ဒီအလုပ်အတွက်လုပ်ထုတ်ပြန်ချက်များ corroborate ။ သို့သော်လည်းငါသည်နှိုင်းယှဉ်သို့မဟုတ်ပြပွဲအပြန်အလှန်စာပေးစာယူလုပ် averse ခဲ့သည်။ ငါသည်ဤအလုပ်ကိုတစ်ခုတည်းကိုသာ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်တန်ရာအပေါ်စီရင်ခြင်းကိုခံရချင်တယ်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်တွင်ကျွန်မကျမ်းစာ၏ပျောက်ဆုံးသွားသောစာအုပ်များနှင့်ဧဒင်များ၏မေ့လျော့စာအုပ်များင်တစ်ဦးအသံအတိုးအကျယ်ဝယ်ယူခဲ့သည်။ ဒီစာအုပ်တွေကို၏စာမကျြနှာ scan ဖတ်တွင်, တဤနေရာတွင်အဆိုပါ Triune ကိုယ်ပိုင်နှင့်၎င်း၏သုံးပိုင်းနှင့် ပတ်သက်. တိကျမ်းစာ၌လာသည်ကားအဘယ်အရာကိုနားလည်လာသောအခါကျမ်းပိုဒ်ရှုနိုင်ပါတယ်မည်မျှထူးဆန်းနှင့်မဟုတ်ရင်နားမလည်ကြည့်ဖို့အံ့သြစရာဖြစ်၏ သခင်ယေရှု၏စကားများတွင်ဖြစ်သောစုံလင်, သနေိုငျရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်နှင့်အပြီးအပိုင်၏ဘုံသို့လူ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သစ်များအစားထိုးစိုက်ပျိုးအကြောင်းကို "ဘုရားသခင်၏ဒမ်း။ "
နောက်တဖန်တောင်းဆိုမှုများကျမ်းပိုဒ်၏ ပတ်သက်. ရှင်းလင်းပြောကြားဘို့ကြပြီ။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကအတွေးအခေါ်နှင့် Destiny ၏စာဖတ်သူများသက်သေအထောက်အထားဓမ္မသစ်ကျမ်း၌၎င်း, ဖော်ပြခဲ့တဲ့အထက်ပါစာအုပ်များအတွက်နှစ်ဦးစလုံးတွေ့နိုင်ပါသည်သောဤစာအုပ်ထဲတွင်အခြို့သောထုတ်ပြန်ချက်များ corroborate တချို့သက်သေအထောက်အထားပေးအပ်ခြင်းခံရသည်ဟုလည်းဤအမှုကိုပြုသောမည်အကြောင်းကောင်းစွာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကြောင့်ငါသည်ဤကိစ္စရပ်များနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်အခန်းက X, ဘုရားနှင့်သူတို့၏ဘာသာတရားတစ်ခုပဉ္စမအပိုင်းကိုထည့်သွင်းပါလိမ့်မယ်။
နယူးယောက်, မတ်လ 1946
နိဒါန်းမှ Continue ➔